အရည်အသွေးမြင့် စိတ်ကြိုက် Biodegradable Shopping ပြန်သုံးနိုင်သော Eco Non-Woven Tote Bag စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ | လန်းဟိုင်း
စိတ်ကြိုက် Biodegradable Shopping ကို Lamination မပါဘဲ ပြန်သုံးနိုင်သော Eco Non-Woven Tote Bag
ပစ္စည်း- 80gsm-110gsm non ယက်လုပ်၍ရနိုင်သည်။
(သင့်တော်တဲ့ပစ္စည်းကို ဆိုဒ်အလိုက် အကြံပြုပေးနိုင်ပါတယ်)
ထုတ်ကုန်အမည် စိတ်ကြိုက် Biodegradable Shopping ကို Lamination မပါဘဲ ပြန်သုံးနိုင်သော Eco Non-Woven Tote Bag
ပစ္စည်း 80gsm-110gsm non ယက်သည် အလုပ်လုပ်နိုင်သည် (သင့်လျော်သောပစ္စည်းကို အကြံပြုရန် သင့်အရွယ်အစားအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်)
အရွယ်အစား 40X 30X10CM၊ 40X33X10CM၊ 45X30X14CM သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား။
Lamination အမျိုးအစားများ Glossy Lamination / Matt Lamination / Laser Film Lamination / No Lamination စသည်တို့။
လက်ရာ Heat-Seal (Ultrasonic)၊ "X" ချုပ်ခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း စသည်တို့။
ပုံနှိပ်ခြင်း။ ပိုးပုံနှိပ်ခြင်း၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ အော့ဖ်ဆက်ပုံနှိပ်ခြင်း။
အသုံးပြုမှု စျေးဝယ်ခြင်း၊ ပရိုမိုးရှင်း၊ လက်ဆောင်၊ ကုန်စုံ၊ စူပါမားကတ်၊ ကြော်ငြာ၊ အဝတ်အစား၊ ဝိုင်ပုလင်း၊ ပြပွဲ၊ စသည်တို့။
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် တစ်လလျှင် ယက်မရှိသောအိတ် 60000 ကျပ် စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ပါ။
ထုပ်ပိုးခြင်း။ OPP အိတ်ထဲတွင်ထုပ်ပိုးပြီး 200 အပိုင်းပိုင်းအိတ်တစ်ပုံးတွင်ထုပ်ပိုးထားသည်။
မြန်ဆန်သောလုပ်ဆောင်ချက် ကျွန်ုပ်တို့သည် 1 နာရီအတွင်း client ၏မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားပေးပါမည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဝန်ဆောင်မှု- စုံစမ်းမေးမြန်းခြင်းမှ ->နမူနာပြုလုပ်ပါ -> အမိန့်စတင် -> စစ်ဆေးခြင်း-> ပေးပို့ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် client တစ်ခုစီအတွက် 1 မှ 1 အထူးဝန်ဆောင်မှုရှိသည်။ ဖောက်သည်တစ်ဦးစီကို ထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးသည်။
မှာယူမှုအဆင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကိုအခြေခံ၍ သင်ကောင်းစွာအိပ်စက်နိုင်ပါသည်။
အရည်အသွေးကောင်း: ငါတို့တွင်ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့ရှိသည်, အမိန့်အရည်အသွေးကိုသေချာပါစေ။
ပစ္စည်းမပို့မီ အပြီးအစီး ကောင်းမွန်ပါသည်။ ဖောက်သည်သည် အရည်အသွေးအတွက် စိတ်မပူပါနှင့်။
ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သောစျေးနှုန်း ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည် အနိမ့်ဆုံးဟု မပြောနိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းသည် ဖောက်သည် ဖြစ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပံ့ပိုးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ လိုအပ်သည် ၊ သင်ပိုမိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အနည်းအများ မှာယူမှု- ငါတို့သည်သေးငယ်သောပမာဏကိုလက်ခံသည်၊ လျှော့စျေးကိုလည်းထိန်းသိမ်းထားသည်။
စျေးပေါသောပို့ဆောင်မှု- ကျွန်ုပ်တို့တွင် forwarder နှင့်အတူ ကြီးမားတဲ့လျှော့စျေးရှိပါတယ်၊ ကုန်ပစ္စည်းများကို သင့်ထံ အမြန်ရောက်ရှိအောင်ထားပါ။ ဘေးကင်းရေး။
1. MOQ: ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အများစုအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် MOQ မရှိပါ၊ ပို့ဆောင်ခကို သင်ဆန္ဒရှိသရွေ့ အခမဲ့နမူနာများ ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
2. ငွေပေးချေမှု- ကျွန်ုပ်တို့သည် T/T၊ Western Union နှင့် PayPal တို့မှ ငွေပေးချေမှုကို လက်ခံပါသည်။ တန်ဖိုးမြင့် အော်ဒါများအတွက် L/C ပေးချေမှုကိုလည်း လက်ခံပါသည်။
3. တည်နေရာ- ကျွန်ုပ်တို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းတွင်ရှိသော စက်ရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအရာ- သတ္တုတံသင်များ၊ တံဆိပ်များ၊ အကြွေစေ့များ၊ ဆုတံဆိပ်များ၊ သော့ချိတ်များ၊ အပြင်ကြိုးများ၊ ကာဘိုင်များ၊ ID ကတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ၊ ရောင်ပြန်တံဆိပ်များ၊ ဆီလီကွန်လက်ပတ်များ၊ ကြိုးစည်းများ၊ PVC ပစ္စည်းများ စသည်တို့။
5. ပို့ဆောင်ချိန်- နမူနာပြုလုပ်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းပေါ်မူတည်၍4ရက်မှ 10 ရက်သာကြာပါသည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုအတွက်၊ 5,000pcs (အလတ်စားအရွယ်အစား) အောက် ပမာဏအတွက် ၁၄ ရက်အောက်သာ ကြာသည်။
6. ပို့ဆောင်ခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည် DHL တစ်အိမ်တက်ဆင်းအတွက် အလွန်ယှဉ်ပြိုင်ရသောစျေးနှုန်းကို ခံစားရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ FOB ကောက်ခံမှုသည် တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် အနိမ့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
7. တုံ့ပြန်ချက်- လူ 20 အဖွဲ့သည် တစ်ရက်လျှင် 14 နာရီထက်မနည်း ရပ်တည်နေပြီး သင့်မေးလ်ကို တစ်နာရီအတွင်း တုံ့ပြန်မည်ဖြစ်သည်။
8. ဆန်းသစ်တီထွင်မှု- လူ4ဦးကို ဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အဖွဲ့ကို 2011 ခုနှစ်မှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် artigifts၊ ထိပ်တန်း 500၊ ထိပ်တန်း 100၊ T-Mobile နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကုမ္ပဏီပေါင်း 500 ကျော်တို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သည်။
9. စျေးနှုန်း- ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူများသာ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ထုတ်ကုန်ကောင်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
1. ထုတ်ကုန်နမူနာများ ရနိုင်ပါသလား။
နမူနာများရယူရန် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် whatsapp ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
2. သင့်တွင် ကတ်တလောက်ရှိပါသလား။
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့မှာ ကတ်တလောက်ရှိတယ်။ ပေးပို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ သို့သော် Artigifts သည် စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို ပေးဆောင်ရာတွင် အထူးပြုထားကြောင်း သတိရပါ။ အခြားရွေးချယ်စရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြပွဲရှိုးများထဲမှ တစ်ခုအတွင်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ လာရောက်ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်သည်။
3. ကြိုတင်ငွေပေးချေရသောကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် သင့်ထံမှ ကျွန်ုပ်၏အော်ဒါကိုရမည်ဟု အာမခံသော ကျွန်ုပ်အား မည်သည့်အာမခံချက်ရှိသနည်း။ သင်ပေးပို့သော ကုန်ပစ္စည်းများသည် မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် ပြုလုပ်မှု ညံ့ဖျင်းပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။
Artigifts သည် 2006 ခုနှစ်မှစတင်၍ လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သည် ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များဖန်တီးရာတွင်သာမက ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ခိုင်မာပြီး ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခြင်းလည်းပါ၀င်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။ ဖောက်သည်များကြားတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂုဏ်သတင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ကျေနပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဖောက်သည်တစ်ဦးအမှာစာပြုလုပ်သည့်အခါတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုချက်အရ အတည်ပြုချက်နမူနာများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်ခြင်းမစတင်မီ ဖောက်သည်ထံမှ ဦးစွာအတည်ပြုချက်ရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးစီးပွားလည်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် "Full After-Sales Service" ကို တတ်နိုင်သည် ။ ထုတ်ကုန်သည် သင်၏တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ ချက်ချင်းပြန်အမ်းငွေ သို့မဟုတ် ချက်ချင်းပြန်လည်ဖန်တီးမှုများကို ပေးနိုင်ပါသည်။
ဖောက်သည်များအား ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အနေအထားတွင် သတ်မှတ်နိုင်ရန် ဤပုံစံကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖန်တီးထားပါသည်။
4. ပို့ဆောင်ပြီးသော ကျွန်ုပ်၏အမှာစာ၏ ခြေရာခံနံပါတ်ကို မည်သို့ရနိုင်မည်နည်း။
သင့်မှာယူမှုကို ပို့ဆောင်သည့်အခါတိုင်း၊ ဤပို့ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်အားလုံးအပြင် ခြေရာခံနံပါတ်နှင့် ပတ်သက်သော အချက်အလက်အားလုံးကို ပို့ဆောင်ပေးမည့် အကြံပြုချက်အား တစ်နေ့တည်းတွင် သင့်ထံ ပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
5. သင်သည် စက်ရုံ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသလား။
ယခင်- စျေးပေါသော စိတ်ကြိုက် Logo tote စျေးဝယ်အိတ် ကင်းဗတ်အိတ် တံဆိပ်ပါသော ချည်အိတ်
နောက်တစ်ခု: စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်စူပါမားကတ်ကုန်စုံပရိုမိုးရှင်းဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းမရှိဘဲ ယက်မသယ်သည့်အိတ်
စိတ်ကြိုက် ယက်မဟုတ်သော အိတ်များ
စိတ်ကြိုက် Hes Gift Hessian Natural Jute Draw...
စျေးသက်သက်သာသာ စိတ်ကြိုက် Logo tote စျေးဝယ်အိတ် ကင်းဗတ်...
စိတ်ကြိုက်သေးငယ်သော Eco Friendly Zipper Make Up Bag Co...
OEM စိတ်တိုင်းကျ ရောင်စုံ muslin စိတ်ကြိုက်ချည်...
စိတ်ကြိုက် Logo ပုံနှိပ်ပြီး ပြန်သုံးနိုင်သော ကုန်စုံလက်ဆောင် P...